चर्चित कोरियोग्राफर गीता कपुरले को संग गरिन बिवाह ? - Nepali in Australia
May 18, 2021 autherLeaveaComment on चर्चित कोरियोग्राफर गीता कपुरले को संग गरिन बिवाह ?
मुम्बई । चर्चित कोरियोग्राफर गीता कपुर बलिउडका अविवाहित सेलिब्रेटी मध्य एक हुन् । उनले अहिलेसम्म आफ्नो जीवनसाथी रोजेकी छैनन् । अहिले भने गीताको केही तस्बिर बाहिर आएको छ । जुन चर्चामा छ । तस्बिरमा गीताले सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी छन् । तस्बिरका कारण उनको विवाहको हल्ला फैलिएको छ ।